काङ्ग्रेसमा सभापतिको अधिकारमाथि बहस, कति अधिकार दिँदा उचित ? | Rajmarga
काङ्ग्रेसमा सभापतिको अधिकारमाथि बहस, कति अधिकार दिँदा उचित ?
संविधानको प्रावधानअनुसार पार्टी विधानमा महिलाको सहभागिता स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म ३३ प्रतिशत बनाउन लागिएको छ । गत भदौ ९ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले विधान संशोधनका लागि महासमितिको बैठक आगामी मङ्सिर ५ देखि ९ सम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । – भीष्मराज ओझा /रासस
Previous post: कृत्रिम गर्भाधानबाट सिंहका बच्चा जन्माइयो
Next post: निर्मला पन्त हत्या प्रकरणः डिएनए रिपोर्ट मिलेन